COVID-19 – Mandalay International Science Academy
February 10, 2022 Wai Yan
The school administration of MISA would like to inform you that the school’s onsite/ face-to-face classes will be halted from tomorrow until the 25th of February; asapreventative measure from the spread of COVID-19.
We hope to resume onsite/ blended classes on the 28th of February.
The school will continue to open online.
We will continue to use the most up-to-date timetable.
COVID-19 ကူးစကျနိုငျခမြှေ ကာကှယျရနျအတှကျ ကြောငျးတှငျး လာရောကျသငျကွားသညျ့ onsite/ face-to-face အတနျးမြားအား မနကျဖွနျမှ စတငျကာ ဖဖေျောဝါရီလ၂၅ ရကျနအေ့ထိ နှဈပတျခနျ့ ပိတျထားရနျ ကြောငျးအုပျခြုပျရေးအဖှဲ့က ဆုံးဖွတျလိုကျကွောငျး အသိပေးအကွောငျးကွားလိုပါသညျ။
ဖဖေျောဝါရီလ ၂၈ ရကျ တနင်ျလာနတှေ့ငျ onsite/ face-to-face အတနျးမြား ပွနျဖှငျ့ရနျ ပွငျဆငျထားပါသညျ။
အှနျလိုငျးမှ သငျကွားခွငျးအား ပုံမှနျအတိုငျး ဆကျ ဖှငျ့လှဈသှားပါမညျ။ လကျရှိ နောကျဆုံး အသုံးပွုလကျြရှိသော စာသငျခြိနျ အခြိနျဇယားအတိုငျး ဆကျလကျ သငျကွားပါမညျ။
မိဘမြားအား အခွအေနအေရပျရပျအား ထပျမံ အကွောငျးကွားပေးပါမညျ။
COVID-19 ကူးစက်နိုင်ချေမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ကျောင်းတွင်း လာရောက်သင်ကြားသည့် onsite/ face-to-face အတန်းများအား မနက်ဖြန်မှ စတင်ကာ ဖေဖော်ဝါရီလ၂၅ ရက်နေ့အထိ နှစ်ပတ်ခန့် ပိတ်ထားရန် ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားလိုပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက် တနင်္လာနေ့တွင် onsite/ face-to-face အတန်းများ ပြန်ဖွင့်ရန် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
အွန်လိုင်းမှ သင်ကြားခြင်းအား ပုံမှန်အတိုင်း ဆက် ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။ လက်ရှိ နောက်ဆုံး အသုံးပြုလျက်ရှိသော စာသင်ချိန် အချိန်ဇယားအတိုင်း ဆက်လက် သင်ကြားပါမည်။
မိဘများအား အခြေအနေအရပ်ရပ်အား ထပ်မံ အကြောင်းကြားပေးပါမည်။